Akụkọ banyere uwe mwụda
Na mgbe gara aga, uwe dị otú a maka anyị nile dị ka uwe mwụda, na-arụ ọrụ dịka nchebe a pụrụ ịdabere na ya megide oyi na ifufe, ọ bụghị nanị nye ndị inyom, kamakwa ụmụ nwoke. Akụkọ banyere ọdịdị nke uwe mwụda mbụ ahụ ka bụ ihe omimi, mana ugbua na V-IV nke narị afọ iri ise BC, a na-ekesa ihe a nke uwe-ekpuchi. Na mbu, ndị nna nna anyị enweghị ndị uwe ojii maka ndị inyom na ndị ikom. Ihe dị mkpa abụghị naanị mmekọahụ, kamakwa afọ, ọnọdụ mmadụ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, onye ọ bụla na-eyikarị ihe ọ bụla. Naanị na oge emepechabeghị, akụkọ ihe mere eme nke uwe mwụda ahụ, dịka isiokwu nke uwe ejiji ụmụ nwanyị, malitere nkwụsị.
Ugwu nke Oge Ochie
Akụkọ banyere mmalite nke ejiji ndị inyom mara mma malitere na Spain na njedebe nke narị afọ nke iri na ise. N'oge ahụ, a na-ewere ejiji dị ka ihe kachasị mma nke ejiji kwa ụbọchị, ụmụ nwanyị na-eyikwa ejiji maka nnọkọ oriri na ọṅụṅụ. A maghị kpọmkwem onye bịara n'echiche nke ịkekọrịta uwe ahụ dum n'ime corset na uwe mwụda, ma ọ dị nnọọ ebe nile. Ụkwụ ahụ kwere ka nwanyị ghara ịmepụta ihe oyiyi ejiji, na-agbanwe uwe elu ya ma ọ bụ corset, kamakwa iji zọpụta ya na ákwà ndị na-efu ọtụtụ n'oge Ọkachamara.
O juru anya, ma akụkọ ihe mere eme nke uwe nwanyị jikọtara ya na ... ịnyịnya! Ịgba ntutu na-arụ ọrụ dịka ihe na-egbuke egbuke n'etiti ọtụtụ ụdị ákwà, na-eme ka uwe mwụda dị nnọọ mma. Ejiri uwe ndị a dị mma, ma nnukwu ibu ntutu isi ekweghị ka ụmụ nwanyị na-akwagharị na uwe.
A na-eji akwa ọkpụkpụ dochie anya ọkpụkpụ dị arọ mgbe iri afọ ole na ole gasịrị. E jikọtara ya na pyramid dị ka design designs nke dị iche iche diameters, ụmụ nwanyị na-adabere n'úkwù, na kpuchie ha na-akwa ákwà. A na-etinye uwe elu dị otú ahụ kpọmkwem na corset, n'ihi ya, ụmụ nwanyị apụghị ịkwado n'enweghị enyemaka.
Ndị Ịtali na ndị nwanyị French kpebiri iwepụ nnukwu osisi ndị ahụ dị egwu, na-eji ihe owuwu na-acha owu na-edochi ha. Ma akụkọ ihe mere eme nke uwe ahụ na-ekwu na nhọrọ dị otú ahụ adịghị adịte aka. Ugbua na narị afọ nke iri na asaa, e nwere ụdị ihe ejiji na-adị mma, a na-eji ya mma ma ọ bụ na-eme ihe atọ. Ụra ahụ dị nnọọ ukwuu nke na a na-ewere uwe elu nke iri na ise dị ka ihe nkịtị.
Afọ iri ole na ole ka e mesịrị, ụda-mgbịrịgba abatakwa ejiji. Na mbụ, a na-eji olu otu skeletons ahụ emepụta olu ahụ, ma mgbe ahụ, ndị na-emepụta crinoline nọchiri ha. Eziokwu na-adọrọ mmasị: nlezianya na ịdị mma, nke dị na narị afọ nke iri na itoolu bụ ụkpụrụ nke ejiji ụmụ nwanyị, ewepughị uwe nke agba ọ bụla, nke ọzọ karịa ọcha. Nwanyị nọ na uwe na-acha uhie uhie na-akpa aka n'etiti ndị akwụna. Ma, a nabatara ihe ndị a na-emetụ n'ahụ, n'ihi ya, a na-eji uwe mwụda na - eyi egwu - nnukwu volley.
Ugbua nke oge a maka ndi nwanyi
N'ihe dị iche iche nke afọ 1920, Cecilia Sorel, nke a na - ewu na Cecilia Sorel, na - emepụta obere ụdị nke Mary Quant na - emepụta, nke a ma ama site na Twiggy a ma ama, na - agbatị ogologo oge - n'agbanyeghị otú mgbanwe si metụta isiokwu a gbasara uwe ejiji ụmụ nwanyị! Ọrụ nke ndị inyom nọ na nke oge a ka a gbanwegharịrị na mmalite nke narị afọ gara aga, ya mere, taa, onye ọ bụla ejiji nwere onwe ya ịhọrọ uwe ọ na-amasị. Uwe mwụda ahụ dịkwuo mfe ma dị irè, ọ dịghị mkpa ịzobe shins na ikpere. Ihe dị mma na nke yiri, laconic na okomoko, mkpụmkpụ na ogologo, nnukwu na airy, dị mfe na multilayered, monochrome na agba - oke nkedo dị na njedebe nanị site na uto na atụmatụ nke nwanyị.
Ihe eji eme ihe maka ndi nwanyi afo iri ise
Foto foto nke ụmụ agbọghọ
Akuko akụkọ oyi
Nzuzo nke mma nwanyi
Nnukwu ọkụ - nke ịchafụ?
Kedu ihe ị ga-eyi akwa jaket?
Isiokwu mmiri na uwe
Kedu ihe ị ga-eji ejiji isi awọ?
Ụdị French na-eyi uwe ụmụ agbọghọ
Kedu ka esi ele obere?
Uwe «Nwere Ifuru ebipụta»
Kedu otu esi eji eriri n'olu gị?
Nri nri n'ime aka
Ike omume maka ụmụ nwanyị
Obi David Gandhi nweere onwe ya
Ịmata ụdị mmadụ
Gini mere garlic bara uru maka ahu?
Bruges - Ebe nkiri
Laurent Pie na Mushrooms
20 oghere ọjọọ, nke ndị ohi na-agaghị ahụta
Nkasi obi na ala ala
Ogige ákwà mgbochi
Chebureks na anụ - nke ọma crunchy mgwakota agwa na-egosipụta na dị iche iche bases
Ọrụ Nanny na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Ọgwụgwọ mastopathy fibrous na birch tar
Vomiting na nkịta
Ultraviolet oriọna maka ụlọ
Nri na ọrịa nke gallbladder
Esi echekwa ginger?
Cats maka ịgba egwú
PCR na gynecology - gini ka ọ bụ?
Nwatakịrị nwanyị ahụ gosipụtara onwe ya na Twitter wee mee ka ụwa niile gwụsịa!